ငပျင်း၊ငဖျင်း၊ငနုံ၊ငအ၊ငထူ၊ငပိန်း ~ Myanmar Anti Mlm Group
ပို့ကုန်နဲနေတယ်၊ သွင်းကုန်ကပိုများနေတယ်၊ လူပိန်းနားလည်အောင်ပြောမယ်၊
ပို့ကုန်နဲလို့ နိုင်ငံခြားငွေဝင်တာနဲတယ်၊ သွင်းကုန်အတော်များနေလို့ နိုင်ငံခြားငွေ
ထွက်တာအရမ်းများနေတယ်။ ဒီတော့ ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်၊ဒီကြားထဲ
နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ချင်ဘူး၊ဒီတော့မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျအုံးမှာပဲ၊ ၂၀၁၈ ထိကျပ်ငွေတန်ဖိုးပြန်မတက်နိုင်ဘူး။ ထားပါတော့။ တိုင်းပြည်စီးပွါးရေးကျနေပြီ၊
ဒီကြားထဲ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ချမ်းသာစေချင်သူတွေကျေးဇူးကြောင့် မြန်မာငွေ
သန်းပေါင်းများစွာနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကို ထွက်သွားပြီ၊ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေ၊ ဒါတောင်သူတို့က တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ချင်တုန်း။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ တိုင်းပြည်ဆိုတာ အပျိုပေါက်လေးနဲ့တူတယ်၊ တိုင်းပြည်ကဆင်းရဲတော့ ဆင်းရဲတဲ့အပျိုလေးပေါ့၊အလကားရမလားဆိုပြီး လက်တဲ့စမ်းချင်တဲ့ဟာတွေလဲရှိတယ်၊ တကယ်ချစ်လို့မြေတောင်မြှောက်ပေးချင်သူတွေလဲရှိတယ်၊မုဒိန်းကျင့်ဖို့ချောင်းနေတဲ့ဟာတွေလဲရှိတယ်၊ရရင်အမြတ်၊မရရင်အရင်းဆိုပြီးတွက်နေတဲ့ဟာတွေလဲရှိတယ်၊စပွန်ဆာပေးပြီးဆော်ချင်တဲ့ဟာတွေလဲရှိတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က စောက်မြင်ကပ်လို့ အားအားယားယား အော်နေတာမဟုတ်ဘူး၊တိုင်းပြည်စီးပွါးရေး လမ်းသစ်တွေပေါ်လာချိန် အတုအယောင်တွေ၊ လူနည်းစုကောင်းစားရေးတွေ၊အလိမ်အညာတွေ ပေါ်လာမှာပဲ 18 ရာစုလောက်ကလိမ်နည်းတွေခုထိအသုံးဝင်တုန်း၊ 19 ရာစုလောက်က ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေးကျအောင်လိမ်ခဲ့တဲ့လိမ်နည်းတွေခုထိခေတ်မှီနေတုန်း၊ ဘာလို့လဲမမေးနဲ့ လူက ၂၁ ရာစုရောက်နေပြီ.. ဦးဏှောက်အသိဥာဏ်နဲ့ဗဟုသုတက ၁၉ ရာစုလောက်မှာပဲရှိသေးလို့။တရားဥပဒေအရထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်သေးဘူး၊ဘာလို့လဲ? အစိုးရကိုယ်တိုင်ဒီလိုလိမ်လည်မှုတွေ၊အလိမ်အညာစီးပွါးရေးတွေမှာအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူး၊ဘယ်လိုရှင်းရမလဲရှိသေးဘူး၊တိုင်းပြည်ကိုခုမှပြန်ပြုပြင်နေတုန်း။
ဝင်ငွေကောင်းလို့၊စီးပွါးရေးပြေလည်လို့ အလိမ်ခံရစမ်း၊ ခံသာပါတယ်ဗျာ၊
လုပ်ခလစာကနည်း၊ကုန်ဈေးနှုန်းကမကျ၊ အလုပ်အကိုင်ကရှားပါး၊ နေ့စဉ်ဝင်ငွေကနဲလာ၊လက်လုပ်လက်စားတွေ၊သာမာန်ပြည်သူတွေ ငွေလေး ၅၀၀၀ အောက်ဝန်းကျင်ရဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်၊ ဟင်းရွက်သွားသွင်းတာ တစ်ဗန်းလုံးမှ ၂၀၀၀ ပဲပေးမယ်ဆိုလို့လှည့်ပြန်သွားရတဲ့ ဈေးသည်လဲမနေ့တစ်နေ့က မြင်တယ်။တစ်နေ့လုံး လုပ်မှ ငွေလေး ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ လောက်ရတဲ့လူတွေလဲမြင်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီပိုက်ဆံလေးတွေနဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့ စားသောက်ရင်း စီးပွါးရေးလေးပြေလည်ဖို့ (မချမ်းသာရင်နေ၊ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးရှိရင်တော်ပြီဆိုသူတွေအများကြီးပါ) စားဝတ်နေရေးပြေလည်လိုသူ ပြည်သူများကို လုပ်အားခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့၊ လူမှုရေးအမြတ်ထုတ်ဖို့ (လူရှာခိုင်းတာလေ)၊ ပိုက်ဆံရှာချိန်တွေကို ဂုပ်သွေးစုပ်ပြီး ရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ အချီကြီးချမ်းသာချင်တာဟာ သူခိုး၊ဓါးပြ ထက်တောင် ယုတ်မာပါတယ်၊ ဒီတော့ #Anti တွေပြောတာဘာဖြစ်လဲ??? ခုချိန်မှာတော့ စောလူးမင်းကို လာကယ်တဲ့ ကျန်စစ်သားက မကောင်းဘူးပေါ့လေ၊ အချိန်တန်လို့နွားပိန်ကန်ရင်တော့နားလည်လာမှာပါ၊အကြွေးတွေပိ၊လူမှုရေးပျက်ပြီးပေါ့လေ။ အချိန်တန်လို့နားမလည်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး...ငရဲပြည်တို့၊ပြိတ္တာဘဝတို့ရောက်ရင်သူ့အလိုလိုနားလည်သွားမှာပါ။
Robert K Sain
Robert K Sain / ပြည်သူ့အမြင်